Cunto Fondant (guriga lagu sameeyo) + Casharo Video ah - Farsamooyinka Cunnada
Cunto macaan oo dhadhan macaan leh, waa wax fudud oo lala shaqeyn karo, waligoodna ha ilmaynina, maqaarka maroodigana ma yeesho
Cuntadan macaan waa mid aad loogu jecel yahay kuwa wax ku duba kuwa hiwaayadda ah iyo kuwa xirfadlayaal ah. Jilicsan, siman, fudud. la shaqee oo aad u macaan! Cuntadan macaan waa mid aad u wanaagsan waligaa uma baahnid inaad mar labaad iibsato fondant qaali ah.
Cunnadayda macaan (LMF fondant) waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee abid la daabaco 2010 dib markii aan weli ahaa Shirkadda Cake ee Cake oo wali waa cuntadeyda ugu badan ee la wadaago.
Fondant asal ahaan waa ciyaar lagu cuno cunuggaaga sideed jirka ah ee had iyo jeer doonaya. Haddii jaceylka joogtada ahi yahay ciyaar lagu cuni karo markaa marshmallow fondant waa dhoobo la cuni karo. Waa wax aad u badan, oo si fudud loo isticmaali karo, aadna u dhadhan fiican (kuma talinayo inaad dhoobada cuntid).
Cunnadayda macaan ayaa tan iyo markii dib loo sameeyay, dib loo daabacay oo loo xardhay kumanaan kuwa wax duba, kuwa wax geeya iyo kuwa wax qora. Waxay noqotay mid caan noqotay xitaa waxaa loogu magac daray LMF (liz marek fondant) waa taageerayaal waa weyn. Waxaa la ii sheegay sanado badan in sameynta jaceylka ay aheyd 'waqti aad u badan' ama 'ay aad ugu adkaatay qasanka'. Maalmahan waxaa si weyn loo aqoonsan yahay samaynta jacaylkaaga gaarka ahi inuu yahay kan ugu dhaqaalaha, macaan iyo habka ugu fudud ee lagu heli karo jacayl tayo sare leh.
Marshmallow Fondant vs Joogto Joogto ah
Markii ugu horreysay ee aan bilaabay keega qurxinta sida hiwaayad ahaan 2008, qofka kaliya ee aan wax ka ogaa wuxuu ahaa Wilton. Xitaa ma aanan ogeyn noocyo kale oo jacayl ah oo jira. Ma aanan ogeyn inay adag tahay in la isticmaalo maxaa yeelay waxay ahayd dhammaan wixii aan ku baran jiray. Waxaan kaliya u qaatay inay qaadatay 2-3 isku day si loo daboolo keegga. Tani sidoo kale waxay ahayd kahor warbaahinta bulshada iyo kooxaha facebook sidaa darteed inta badan qashinkeygu waxay ka yimaadeen halgan saafi ah.
Markii ugu horreysay ee abid la isku dayo in la jeclaado waxay ahayd baahi saafi ah. Waxaan qaatay amarkii daqiiqadii ugu dambaysay waxaana si lama filaan ah isu arkay aniga oo aan jeclayn igu filan si aan uga gudbo mashruucayga! Cue mode argagax! Waxaan eegay cunto karis ku saabsan sida loo sameeyo fondant waxayna u baahan tahay tan oo ah karinta iyo maaddooyinka aanan haysan. Ok shaqo joojin. Waxaan hubiyey cunto kale 'fudud oo macmal ah oo macmal ah' oo kaliya u baahan laba maado. Marshmallows iyo sonkorta budada ah. EPIC FASHIL. Way dillaacday, jeexjeexday oo runtii saliid ahayd? Ma hubo sida ay taasi xitaa macquul tahay. Quusasho darteed, waxaan isku darsaday jaceylkii fashilmay iyo qiyaastii 1/2 rodol oo haraaga wilton fondant. Waan isku qasay, waan soo rogay oo waan la yaabay sida ugu fudud ee ay u daboosho keegga! Jeexitaan la'aan, calaamado calaamado lahayn, goobooyin ma jiraan! Waana sida ay ku dhalatay cunugeyga caanka ah ee jacaylka badan.
Natiijooyinka xitaa kafiican, iskuday inaad dul dhigto jaceylkaan dusheena karinta keega cad oo arag sida ay labada macaan u wada shaqeeyaan.
Maxaad Ugu Daraysaan Jaceylka Aad U Jeceshahay?
Aad ayaan u helayaa su’aashaas. Waan gartay. Waxay umuuqataa waxoogaa dib udhac ah inaad kudarido jaceylka qaabka wanaagsan laakiin i maqal.
Waa suurtagal in la sameeyo marshmallow fondant iyada oo aan lagu darin fondant horay loo sameeyay LAAKIIN ma noqon doonto mid fidsan. Kaliya ma noqon doonto. Waan ogahay dad badan oo sameeya marshmallow fondant iyada oo aan horay loo samayn laakiin kaliya ma qabato sidoo kale waxaadna halkan u joogtaa inaad wax ka barato ku raaxeysiga guriga ee ugu fiican ee halkaa jooga?
Sababta loogu daray horay loo sameeyay waa in la hagaajiyo shaqeynta fondant-ka guriga lagu sameeyo waxaadna asal ahaan ka dhigeysaa dufcad raqiis ah oo fondant ah oo laga yaabo in aysan fulin ama u dhadhamin si aad u wanaagsan qayb weyn oo tayo sare leh, super yummy fondant.
Muxuu Ka Sameeyaa Jacaylku?
Bakhaarka la iibsaday ee fondant waxaa laga samayn karaa waxyaabo badan laakiin guud ahaan, waxaa laga sameeyaa sonkorta, dhadhanka iyo nooc ka mid ah xanjada (si loo kala bixiyo). Waxay kuxirantahay iskudhafka saxda ah, muuqaalkaaga jacaylka wuxuu udhaxeyn karaa jilicsan oo dheg dheg ah ilaa calalinta ama xitaa adag! Waxaan badanaa u sheegaa qof kasta oo dhaha ma jecla dhadhanka fondant ee kaliya jecel shukulaatada dukaanka raashinka raqiiska ah marka la barbar dhigo gogosha, arrimaha tayada leh. Jacaylka oo dhan isku mid ma wada aha!
Qof kasta ayaa kuu sheegi kara in jacaylka wanaagsan uu jiro.
Marshmallow fondant ma laha waxyaabo badan. Marshmallows waxay bixiyaan qaabdhismeedka ugu weyn. Marshmallows waxaa ku jira inta badan sonkorta iyo gelatin. In yar oo khudradda gaabin ah ayaa ka caawisa qofka jecel inuu qalalo. Qaybta ugu fiican ayaa ah in LMF ay sida ugu fiican u shaqeyso markii aad runtii isticmaasho marshmallows raqiis ah taas oo keeneysa qiimaha halkii dufcadood xitaa ka sii hooseeya.
Miyuu jecel yahay runtii dhadhamiyaa wax xun?
Fondant waa mid ka mid ah waxyaabaha ay macaamiishaydu ii sheegi jireen inay NACAYN jireen kahor a dhadhaminta keegga arooska . Waan dhoola cadeyn lahaa oo waan isqancin jiray oo waxaan dhihi lahaa 'ok' laakiin waan ogaa in markey dhadhamiyeen cuntadeyda macmalka ah ee marshmallow (oo loogu magac daray LMF taageerayaasheeda) waan ku qasbi lahaa. Waxba kuma qancin marka loo dhiibo wixii yaraa ee xiisaha badnaa oo aan arko muuqaalka wejigooda oo ka socda 'Runtii ma jecli doono sidan' illaa naxdin saafi ah, ka dib in yar oo dheeraad ah oo calalin ah, dhoolla caddayn weyn, ka dibna ugu dambayntii 'OMG runtii tani way wanaagsan tahay! ”
ilaa intee ayay qaadan doontaa daawashada
My marshmallow fondant wuxuu ahaa hubkeyga qarsoodiga ah sanado badan hadana hada adigana adigana adigana
Cunto Fudud Fudud Oo Loogu Talo Galay Bilowga
Marka waxaad dooneysaa inaad la shaqeyso qof jecel laakiin waad cabsaneysaa! Waan gartay! Dad badan oo bilow ah way nexsan yihiin inay la shaqeeyaan maxaa yeelay waxay maqleen sida ay u adag tahay inay la shaqeeyaan! Laakiin waad ogtahay waxa? Sirta guusha runti waxay tahay sameynta naftaada. Haddii aad jeexjeexayso, jeexjeexayso, maqaarka maroodiga, calaamadaha calaamadaha, goobooyin ama xitaa qallal, waxaad u badan tahay inaad isticmaaleyso fondant dukaanka la iibsaday oo iska caadi xun.
Hadaad runti rabto inaad waxbadan ka barato waxa ku saabsan aasaaska qurxinta keega waxaad ka daawan kartaa taxanaheena Sugar Geek Show iyo hadii taasi aysan kugu xirneyn, kaayaga taxanaha aasaasiga keega arooska doonaa!
Cuntadani way fududahay in la sameeyo, ma qaadato wax maaddooyin qurxan leh waxayna u shaqeysaa sida ugu fiican isla marka aad sameyso ka dib (wali way diirran tahay).
Ma Sameyn Kartaa Farxad la'aan Marshmallows?
Mid ka mid ah waxyaabihii ugu fiicnaa ee abid ka yimid cuntadeyda 'LMF' ayaa laga yaabaa inay tahay DKF (Danettes Kosher Fondant). Saaxiibkey Danette ma cuni karo gelatin sidaa darteed waxay hindisay cunto macaan oo si fudud loo sameeyo sida LMF laakiin waxay isticmaashaa marshmallow fluff halkii ay ka jaban lahayd marshmallows. Waxay u shaqeysaa sidoo kale waana kosher!
Talooyin Ku Saabsan La Shaqaynta Fondant
Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha kale ee lagula shaqeynayo fondant guriga lagu sameeyo. Waxaad waxbadan ka baran kartaa aasaaska keega qurxinta taxanaheena qurxinta keega.
Duub caashaqaaga qaaliga ah. 1/8 ″ waa meel wanaagsan oo la joogo si aanad u jecleyn qofka aad jeceshahay, waxaad heli kartaa dhinacyadaas fiiqan waxaadna ka heli kartaa inta ugu badan hal dufcadood.
Qabooji keegaaga kahor intaadan daboolin. Hubso inaad subag macaan ama ganache waa wax fiican oo qabow (laakiin aan barafaysanayn) ka hor intaadan daboolin keega natiijooyinka ugu fiican.
Isku soo duub qofka aad jeceshahay ee ka weyn waxa aad u baahan tahay. Khaladka bilowga ah ee caadiga ah ayaa soo rogaya qofka aad u yar ka dibna waxaad heleysaa tan ruffles iyo ilmo agagaarka salka keega. Haddii aad soo rogto gabal ka weyn, ficil ahaan waa is daboolayaa.
Shuruud geli jacaylkaaga kahor intaadan isticmaalin. Ilaa aad samaysatay mooyee, ka dibna marwalba diirran jacaylkaaga oo si fiican u cajiim ilaa ay fiican tahay oo fidsan tahay. Qabow qabow wuxuu jecel yahay inuu jeexo.
Haddii aad leedahay tieryo badan oo aad daboosho, marka hore daboolo tan ugu weyn oo aad jidkaaga ugu hooseyso tan ugu yar si aad uga faa'iideysato waxa aad jeceshahay. Hal dufcad oo LMF ah ayaa dabooli doonta wareeg ah 10 ″ -8 ″ -6 with oo xoogaa hadhay haddii aad u rogto dhumucdiisuna tahay 1/8 ″.
Sideed u Midabaynaysaa Jacaylka?
Mar alla markii aad ku guuleysatid sameynta cuntadaada macmacaanka ah ee macmacaanka lagu sameeyo, waxaad u baahan kartaa midabee karintaada macaan . Furaha halkan ayaa ah inaad hubiso inaadan isticmaalin midabaynta cuntada aad u badan. Haddii aad wax badan isticmaasho waxay sababi kartaa halaagsanaanta joogtaynta qofka aad jeceshahay waxayna umuuqataa inay leedahay godad yar yar.
Hadaad rabto a midabka khafiifka ah ee fondant waxaad si fudud ugu dari kartaa midab yar fondantkaaga cad laakiin hadaad rabto midab aad u dhalaalaya ama midab madow sida madow jacayl ama casaan fondant markaa waxaad u baahan tahay inaad ku darto midabka inta lagu gudajiro hawsha sameynta natiijooyinka ugu wanaagsan.
Qalabka Jikada Ee Lagu Sameeyo Marshmallow Fondant
Fiicni Kitchenaid Markii ugu horreysay ee aan qurxinta bilaabay, waxaan haystay gacan fudud oo gacan labaad ah KitchenAid. Taasi waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay! Cuntadani waxay si fiican u shaqeysaa markii lagu sameeyay cabbirka caadiga ah.
10ka ugu sarreeya ee ugu wanaagsan ee ilaaliya waqtiga oo dhan
Sida Loo Sameeyo Wacan
Microwave 1 lb ee marshmallows 30-ilbiriqsi ayaa qarxaya illaa uu si buuxda u dhalaalayo
Ku dar biyahaaga oo ku shub marshmallows dhalaalay baaquli isku-darka miisaanka leh cajiinka ku xiran
Ku dar khudraddaada oo gaabinaysa
Ku billow inaad ku darto dhammaan sonkortaada budada ah hal koob markiiba, ka tag hal koob
Jaceylkaaga ha isku qasnaado hoose illaa inta siman, tani waxay qaadan kartaa 5 daqiiqo ama wax la mid ah
Ka xoq feerka saxanka leh spatula weelkaaga sonkorta budada ah ee hartay
Caji isku dar ah ilaa inta sonkorta budada ah oo dhan lagu daro
Kululee dukaankaaga iibsaday fondant 30 ilbidhiqsi kuna dar marshmallow fondant
Cajiin ilaa uu jacaylku ku fidsan karo sida caatada oo kale isagoo aan kala jabin
Si aad u sameyso cuntadan, waxaad u baahan doontaa dukaan yar oo la soo iibsaday. Maaha inay ahaato Wilton laakiin taasi waa tan aan ku heli karo halkan waana mid aad u jaban LAAKIIN waad ku heli kartaa xitaa ka raqiisan haddii aad isticmaasho kuuboon. Waxaan ka helaa jacaylkeyga midkood Jo-Anns ama Michaels oo had iyo jeer waxaa jira kuuboon ama khadka tooska ah ama barnaamijka. Waxaad dooneysaa inaad soo iibsato sanduuqa weyn (5 lbs) ka dibna isticmaal kuuboon si aad uga hesho 40%. Waad iska diiwaan gelin kartaa si aad uguhesho kuuboonada barnaamijka ama websaydhka. Sanduuq kasta oo ah 5 lb wuxuu ka dhigi doonaa AFAR qaybood oo fondant ah waana mid aad uga raqiisan in la iibsado sanduuqa weyn halkii laga iibsan lahaa hal sanduuq oo yar.
Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa xiisaha Amazon mararka qaarkoodna way ka jaban tahay inaad ku iibsato shaqsi ahaan xitaa kuubbo waxaadna helaysaa maraakiib bilaash ah Amazon Prime.
Waxa xiga waa marshmallows. Waxaan ka iibsadaa Winco laakiin haddii aadan haysan Winco, kaliya raadi marshmallows nooca dukaanka raqiiska ah. Jet-puff wuxuu u egyahay inuu igu adagyahay aniga oo qalalan. Waxaad u baahan doontaa boorsada 1 lb. Marka Winco-kayga hal boorso ayaa ku kacaysa .87!
Kuwani waa maaddooyinka ugu muhiimsan ee samaynta marshmallow fondant oo dhadhamiya wax la yaab leh oo aan jeexjeexin ama aan qalajin. Haddii aad su'aal qabtid horay usoco ugana tag faallooyinka aniga hana iloobin inaad daawato fiidiyowga ku jira cuntada si aad u aragto sida aan u sameeyo miiskayga marshmallow fondant.
Cunnooyinka kale ee aad jeclaan doonto
Cunto karinta ugu fiican ee vanilj
Cunnooyinka fudud ee barafka lagu kariyo
Cunto macaan oo aan jeexjeexin, jeexjeexin ama helin maqaarka maroodiga! Cunto karis jacel oo laga helo rootista hiwaayadda iyo qurxinta keega xirfadeed si isku mid ah! Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:25 daqiiqado Wadarta Waqtiga:30 daqiiqado Kalori:1469kcal
▢32 oz (907 g) sonkorta budada ah shaandheeyey (sidoo kale loo yaqaan sonkorta miraha, sonkorta macaan)
▢16 oz (454 g) marshmallows Shirkadaha WinCo, Hy-Top, Aldi, iyo Campfire ayaa sida ugu fiican u shaqeeya
▢labaatan oz (567 g) Wilton jecel Satin Ice fondant sidoo kale wuu shaqeyn doonaa
▢laba qaaddo (laba qaaddo) biyo diirran Midabada madow, u isticmaal 1 tbsp biyo diiran iyo 1 tbsp jel midabka cuntada ah
▢4 oz (113 g) gaabinta khudradda Sidoo kale loo yaqaan dufanka khudradda cad, trex, copha
Sida loo jeclaado
Kala soo bax sonkorta budada ah kuna rid baaquli weyn.
Gali khudradda gaagaaban baaquli fiicni taagan.
Marshmallows kululeyso 40 sekan oo ku jira microwave-ka sare (ama dusha dabka). Ku walaaq qaaddo.
Marshmallow-yada dib ugu celi microwave-ka oo kululeyso 30 ilbiriqsi oo kale (ama dusha dabka). Ku walaaq qaaddo.
Marshmallow-kuleylka (markii ugu dambeysay!) 30 ilbiriqsi oo ku jira microwave-ka (ama dusha dabka). Marshmallows waa inay ahaay-gooey markan oo ay diyaar u tahay in lagu daro baaquli qasiyaha. Ku shub biyahaaga dusha sare marshmallows si aad uga siidaysid dhinacyada baaquli. Ku shub baaquli leh khudradda gaabin
U jeeso isku darka mashiinka ugu hooseeya (dejinaya 1 on Mashiinnada istaaga Kitchenaid) oo leh lifaaq jillaab ah Ku dar nus ka mid ah sonkorta budada ah ee la miiray, koob cabbiraya markiiba, oo ha isku dar ilaa 2 daqiiqo. Waxay noqon doontaa runtii qallafsan marka hore
Ha joojin isku darka illaa ay ku dhegaan dhinacyada baaquli oo ay u egtahay mid siman. Ku dar koob kale oo sonkor budo ah.
Soo jiido fekerka cajiinka ku xirnaanta adoo dhigaya khudradda gaagaaban ee farahaaga oo ka soo bixiya jillaab.
Iskudarka jilicsan ka soo saar baaquli oo ku rid weelka weyn inta hartay ee sonkorta budada ah.
Ku kululeyso Wilton ku raaxeysiga microwave 40 ilbiriqsi oo ku dar baaquli weyn sonkorta budada ah iyo isku dhafka marshmallow.
Caji ilaa sonkorta budada ah, marshmallows iyo Wilton fondant inta badan waa la isku daray. Ma isticmaali kartid dhammaan sonkorta budada ah waxay kuxirantahay cimiladaada taasna way fiicantahay.
Jiid jacayl u yeelo sida caatada illaa ay ka noqonayso mid fidsan oo siman. Haddii ay weli jiraan dhibco qallafsan ama ay dillaaceyso, wax walba dib ugu celi microwave-ka 30-40 ilbiriqsi si aad uga dhigto mid aad u kulul una jiido sidii taffy oo kale iyadoo gacmahaaga laga gaabinaayo illaa ay ka jiido iyada oo aan la jebin
Ku kaydi boorso zip-qufulka heerkulka qolka. Fondant wuxuu ku hayn doonaa bilo boorso zip-lock ah. Si aad mar labaad u isticmaasho, dib u kululeyso oo si fiican u jilbo ilaa kala-bax ka hor isticmaal kasta. Waad ku dari kartaa midabka sida aad rabto laakiin midabada mugdiga ah, waa inaad ku dartaa inta lagu guda jiro howsha isku dhafka ah ama waxaad heli kartaa qashin dheg dheg ah.
Soo -koobista Dhimashada Socodka: Shane wuxuu Dilaa Badbaadinta Carl
Blair Witch wuu fashilmay
Maxaa u imanaya Netflix bishii Diseembar 2014
Game of Thrones wuxuu siiyaa taageerayaasha Intel Finale cusub oo leh Siideynta Fiidiyowga Guriga
Sababta Evolutionary Maxaad u jeceshahay Kim Kardashians Butt
sida loo sameeyo cupcakes box ka fiican
French cake cake cake recipe ka xoq
maxaa maalmahan hoy u badan
waa george jung out of jail
Soo -koobista Dhimashada Socodka: Glenn iyo Maggie ayaa soo galay
Sidoo kale, Lori waxay ku gudubtaa imtixaanka uurka, Daryl wuxuu noqdaa nin xitaa ka sii wanaagsan, zombiesuna waxay qaataan habeenka.
Netflix Waxay Dhagax -u -dhig u samaysaa Character House of Cards ee Kevin Spaceys ee South Carolina
Goob qabri ah oo loogu talagalay Frank Underwood ayaa ku fadhida qabuuraha South Carolina - oo sugaya in lagu candhuufo.
Scarlett Johansson ayaa dhaleeceeyay carmallada madowga ah ee sawirrada galmada ee Iron Man 2
Scarlett Johansson ayaa si daacadnimo leh uga hadashay is -dhexgalnimada Natasha Romanoff markii ay markii ugu horreysay ka soo muuqatay Marvels Iron Man 2.